Matipi Mashanu Epamusoro Ekuvaka Iyo Inofungidzirwa Hutungamiri Huru hweMukati | Martech Zone
Matipi mashanu Ekumusoro Ekuvaka Iyo Inofungidzirwa Hutungamiri Huru Huru
Mugovera, December 12, 2020 Mugovera, December 12, 2020 Gurpreet Purewal
Denda reCovid-19 rakaratidza kuti zviri nyore sei kuvaka - uye kuparadza - mucherechedzo. Chokwadi, iko chaiko iko kwekuti mabrand ekutaurirana anoshanduka sei. Kushushikana kwagara kuri kiyi mutyairi mukutora sarudzo, asi ndizvo sei mhando dzinosangana nevateereri vadzo dzinoona budiriro kana kutadza mune yepashure-Covid nyika.
Vanoda kusvika hafu yevagadziri vezvematongerwo enyika vanoti hutungamiriri hwesangano hutungamiriri hunobatsira zvakananga kumatambiro avo, zvakadaro 74% emakambani haana kufunga zano rehutungamiriri panzvimbo.
Edelman, 2020 B2B Akafunga Hutungamiri Hwempact Kudzidza
Mune ino blog, ini ndichaongorora mashanu epamusoro matipi ekuvaka iyo inokunda pfungwa yehutungamiriri zano:
Zano 1: Tarisa pane Zvinodiwa nevatambi Kubva Kambani Yako
Zvinogona kunzwika semubvunzo wekutanga asi hutungamiriri hwekufunga ndezvekuratidzira hunyanzvi hwekambani yako, pane kusimudzira vanhu. Kuti uite izvozvo zvinobudirira, unofanirwa kuona kuti ndeapi matambudziko ayo vateereri vako vachasangana nawo matatu, mana, mashanu emakore ari mberi. Kufunga kwekutungamira hutungamiri kwakakomberedza hunhu uye hutsva hwekutsvagisa, ichipa ruzivo rwehunyanzvi mumusika, ichaona kuti chiitiko chekutaurirana hachiitwe pane zvaunoda, asi yakagadzirirwa vateereri vako nenzira inotungamirwa nedhata yekutaura nyaya.
Zano rechipiri: Iva neChiono chakajeka Kwenharaunda Kwaunofungidzira Hutungamiri Hunozokanganisa Mune Yekutengesa Mufemu
Kunyanya mune iyo B2B nharaunda, kutenga kunogona kuve kwakaomarara uye kwakaoma. Kufunga hutungamiriri hunogona kutora chinzvimbo chakakosha pakuratidza kuti nei iwe uri sarudzo yakanakisa yebasa racho. Izvi zviri pachena kuti zvine mwero nekuti - kusiyana nekushambadzira zvemukati - hutungamiriri hwekufunga haugone kusimudzira zvigadzirwa kana masevhisi zvakanyanya. Indasitiri yekutsvaga inohwina moyo nepfungwa, ichigadzira kukosha kwesarudzo kunoenderana nezvinhu zvakakosha kwazvo kune vateereri vako.
Zano 3: Dzidza Chii Chinoita Kuti Uve Akavimbika Kwazvo
Zvinotora nguva kuti uwane kutendeseka, kunyanya mumisika yakazara. Sezvo kutaurirana kwedhijitari kwaingova nzira chete yekusvitsa vateereri panguva yedenda, vanhu vakaputirwa nezvinyorwa, zvichitungamira nenzira isingadzivisike kuneta. Tinokukurudzira kuti utarise kubatana nemauto anokanganisa akadai semasangano anotengesa, vatengi, uye vanobatirana kutora maonero akagovaniswa pamusoro pehutungamiriri hwekufunga. Izvi zvinobatsira kuvaka chivimbo chiriporipocho chingatore makore kuvaka.
Zano 4: Usarega Chako Zvemukati Sarudzo Kutambura Kuneta
Kuuya nemisoro nyowani idambudziko rakakura kune vazhinji vatungamiriri vanofunga, asi kana iwe uchisvika pairi uchibva pakazvishandira kona, ipapo unozorovera kumadziro nekukurumidza. Vatori venhau, semuenzaniso, havana kuzombopererwa nezvinhu zvekutaura nekuti vari kutsvaga chimwe chinhu chitsva chiri kuitika mukati menzvimbo yavo yehunyanzvi. Uye iyo nhau haimire. Funga semunyori wenhau, sarudza pekutanga tsvagiridzo inounza nyowani uye inonzwisisika yekutsanangudza kumatopiki 'nhau' izvo zvakakosha kune vako vanobatika.
Zano 5: Kuvimbika hakugone kunyeperwa
Muchidimbu: ratidza vateereri vako kuti urimo mairi kwenguva refu. Kufunga hutungamiriri hakusi kwekuratidzira munhu wese kungwara uye kubudirira kwako. Haisi yekuita edgy nekuda kwayo kana. Kufunga hutungamiri ndezvekuratidzira hunyanzvi uye kuratidza kuti uripo kugadzirisa matambudziko nhasi uye mune ramangwana Ita shuwa kuti zvemukati zvirimo, toni yezwi uye data mapoinzi ndeechokwadi uye zvinomiririra zvechokwadi zvaunomirira.
Munguva yekutaurirana kwakawanda, haina kumbobvira yakosha zvakanyanya kukudziridza nzira yehutungamiriri yekufunga iri yechokwadi kukambani yako, ichiwedzera kukosha kune vatengi uye kucheka neruzha. 2021 rinogona kunge riri gore rako rekukwira uye unzwike.
Tags: chokwadizvemukati kunetakutaurirana kwedhijitariutungamiriomnichannelkufunga hutungamiririkuona
Gurpreet Purewal Mubatanidzwa Mutevedzeri weMutungamiri weBusiness Development kuResearch, anotungamira pfungwa hutungamiriri nyanzvi
Kunhuwirira Kushambadzira: Statistics, Olfactory Science, Uye Iyo Indasitiri